Ciidamada Itoobiya iyo kuwa DFKM oo qabsaday degmada Bardaale
Baydhabo:-Ciidamada dalka Itoobiya oo bari taaraya kuwa DFKM ayaa saaka qabsaday degmada Bardaale ka dib markii ay shalay ciidamada al-Shabaab baneeyeen deegaanadaYurkud iyo bohol Bashiir iyo Bardaale. Ciidamada Itoobiya iyo kuwa DFKM ayaa haatan ku sugan Degmada Bardaale waxaana jira dhaqdhaqaaq ciidan ay wadaan ciidamada Itoobiya iyaga oo doonaya in ay gaaraan magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay halkaas oo ay gacanta ku hayaan Ururka Al-Shabaab.
Warar ka imaanaya magaalada Baydho ayaa sheegaya in ay ka jirto xaalada kacsanaan ah iyada oo ay dadka rayidka ah ay bilaabeen in ay u qaxaan dhanka magaalada Muqdisho iyaga oo ka cabsi qaba ciidanka Itoobiya ee duulaanka ku soo qaaday gobalada Bay iyo Bakool.
Ma aha markii ugu horeysay ay ciidamada Itoobiya duulaan ku soo qaadaan deegaano nabada ah oo ay ka taliyaan Islaamiyiinta balse waxaa la wada dhowrayaa in ciidamada Itoobiya ay heysan karaan magaalooyinka waaweyn marka ay ka baxaan Ururka Al-Shabaab.
Warar hoose oo soo gaaray Halgan.net ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay dajisteen qorshe ay ku faarujinayaan dhamaan magaalooyinka waaweyn si loo yareeyo khasaaraha soo gaaraya ciidankooda iyo dadka rayidka ah taas oo naafeyn doonta ciidamada Itoobiya iyo kuwa Kenya.